रवि जेलमा हुँदा सुटुक्क भेट्न गएका सर्वेन्द्र खनाललाई सरकारले किन भेट्न गएको भनेर माग्यो स्पष्टिकरण
August 31, 2019 by साहारा संदेश
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेलाइ भेट गरेको भन्दै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक आइजीपी सर्वेन्द्र खनालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा उनैले नाम जोडेपछि पक्राउ परेका न्यूज २४ टेलिभिजनबाट प्रशारित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तोता रवी लामिछानेलाई आइजीपी खनालले भेटघाट गरेको भन्दै उनीसँग गृहमन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले खनालसँग मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार खनाललाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा गएर किन भेटेको? त्यसबारे किन गृह मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति नलिएको ? भन्दै गृहमन्त्री र गृहसचिवले प्रश्न गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार यो विषयमा गृहमन्त्रालयको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो राखेको बुझिएको छ ।
प्रहरी प्रमुख आफै चितवन पुगेर रविलाई भेटेका हुन वा गृहको कुनै स्वीकृति वा छलफल योजनामा भेटेका हुन ? भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोधपुछ भएपछि गृहमन्त्री र गृहसचिवले खनाललाई बोलाएर सोधपुछ गरेका हुन् । पछि चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५ लाख, उनका सहकर्मी युवराज कँडेललाई ३ लाख धरौटीमा र नर्स अस्मिता कार्कीलाई बिना धरौटी रिहा गरेको थियो ।
Prevप्रभासको फिल्म साहो रिलिज भएकै दिनमा लिक भयो: फ्यानको यस्तो प्रतृक्रीया
Nextनिर्दोष गाइहरुले न्याय पाउने कि नपाउने: गौहत्या विरुद्ध सुर्खेतमा आन्दोलन, प्रहरिद्वारा छानबिन सुरु